Izixhobo ze-Android-iifowuni, iitafile, iwatchwatch kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 40)
Yabelana ngoqhagamshelo lweselfowuni lwe3G kwinethiwekhi yeWiFi
Izixhobo ezitsha ze-Android zinokwabelana ngoqhagamshelo lwedatha ye-3G kunye nokwenza inethiwekhi yeWiFi kwezinye izixhobo ukuba zibe ne-Intanethi
Iipilisi ze-Android zabantwana, iithoyi okanye enye into?
I-Tabeo kunye no-Kindle Fire, iimodeli ezimbini zeepilisi ze-Android ezinokusetyenziswa ngabantwana ngaphandle kwengxaki ngenxa yokuxhathisa kwabo okukhulu
Isamsung Samsung Galaxy S3, Rom Omega V28 XXDLIH Jelly Bean
I-Omega V28 rom yenye yezona zinto zibalaseleyo esinokuzifumana kwi-Samsung Galaxy S3, esekwe kwi-Android Jelly Bean 4.1.2
IHuawei iveza i-Y300 ukuba ilwe naphakathi kuluhlu
IHuawei yazise ngefowuni yayo entsha yeHuawei Y300 eza kuthi ifune ukulawula ibanga eliphakathi ekupheleni kuka-2012
Ibhola ekhatywayo yangempela 2013 ilapha
Ufakelo lwamva nje lwe-saga yebhola ekhutshwe nguGameloft kunye no-Falcao ongumfanekiso, iBhola ekhatywayo yoNyaka ka-2013, ilapha.
I-RootBox Rom Jelly Bean 4.1.2 ye-Samsung Galaxy S2
Enye yeerom ezilungileyo kakhulu kwi-Samsung Galaxy S2, kunye nohlobo lwamva nje lwe-Android 4.1.2
I-Samsung Galaxy Music, yonwabele ukubulela umculo kwizithethi zayo ngetekhnoloji ye-SRS
Awusayi kuphinda uphathe i-MP3 yakho ubulele kwi-Samsung Galaxy Music, i-smartphone entsha ye-Android kunye nezithethi ngetekhnoloji ye-SRS. Wonwabele umculo.
IBeastie Bay, «pokémon» yeKairosoft
I-Beastie Bay, ukongeza kwi-Pokémon yasendle kwinkqubo yayo yomdlalo, ngumdlalo wokuqala wasimahla weKairosoft we-Android.
I-Samsung Galaxy S, iTouchWiz Launcher yeGalaxy S3
Isifundo sokukhuphela kunye nokufaka ngokuBuyisa isiQalisi seTouchWiz sokuqala seSamsung Galaxy S3 efakwe kwi-Samsung Galaxy S
Amanqanaba amatsha eza Uphi uPerry wam?
Uphi uPerry wam? fumana amazwi ngeSpanish athathwe kuthotho kunye namanqanaba amatsha angama-20 kuhlaziyo lwayo 1.1.0
I-Samsung Galaxy S3 Rom engapheliyo iV1.1 yiDora yeQela le-Android 4.1.1
I-Immortal Rom V1.1 ye-Samsung Galaxy S3, ukhuphelo kunye nendlela eneenkcukacha zokufaka, inyathelo ngenyathelo kunye nokucoca i-kernel
Ulawulo lweRom kunye noHlaziyo lwe-Ota kwiTsunami x2.0
I-Tsunami x2.0 yenye yezona roms zibalaseleyo zeJelly Bean esinokuzifumana ngeSamsung Galaxy S, kunye nolawulo lweRom kunye neOta yokuHlaziya edityaniswe kwimenyu.
Uhlobo lwekhibhodi ye-Xperia ye-Samsung Galaxy S
Khuphela ikhibhodi yeXperia ye-Samsung Galaxy S, ngokusebenza njengokuchwetheza ngokuswayipha.
I-Samsung Galaxy S, iRom Tsunami X2.0, iyaqhubeka nomlingo
I-Tsunami X2.0 rom yirali yeJelly Bean ye-Samsung Galaxy S, yenye yezona zinto zikhutshelweyo kunye nezona ziphumeleleyo ngalo mzuzu.
Aphi amanzi am? Fumana amanqanaba akhuthazwe nguFrankenweenie olandelayo
Aphi amanzi am? Fumana amanqanaba amatsha aphefumlelweyo kwifilimu ezayo yeDisney, uFrankenweenie.
I-Google Nexus 7, izixhobo zeV2.0.0 zonke izixhobo ezikunye
Izixhobo zeV2.0.0 zeGoogle Nexus 7 sisixhobo esiya kuthi sivumele ukuba senze nantoni na, ukusuka ekufakeleni uKubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Ekugqibeleni, iJetpack Joyride yakhe wonke umntu!
Omnye wemidlalo emikhulu evela kwiHalfbrick Studios, iJetpack Joyride, ekugqibeleni ifikelele kubo bonke abasebenzisi be-Android.
Isamsung yeSamsung ye-S2, iRom yovuko Remix JB AOKP Kunye neArhente yokufaka
Ukunikezelwa kunye nendlela yokufaka iRom yovuko V3.08 rom ye-Samsung Galaxy S2 ene-Android Jelly Bean.
I-Samsung Galaxy S, iRom Tsunami X1.5, eyona rom yomzuzu neJelly Bean
Ngeli xesha ndikubonisa i-tsunami X1.5 rom, kum eyona jelly Bean rom ye-Samsung Galaxy S, ekhawulezayo kunye nokusebenza kakhulu ndizamile
I-C-Rom Bean 1.8.0 ye-Samsung Galaxy S GT-I9000 OTA
I-Android 4.1.1 Jelly Bean rom evela kwiqela le-C-Rom ye-Samsung Galaxy S, C-Rom Bean 1.8.0
Iipakethe zewijethi yasimahla yesitayile seSense
Iipakethe zewijethi yasimahla yokubukela kuzo zonke izixhobo ekukhuphelweni ngokuthe ngqo ukusuka apha.
I-QissMe Rom, iinguqulelo ezintsha ziyafumaneka kwi-HTC, Motorola kunye ne-Samsung
I-QissMe Rom zirom ezinomfanekiso ocacileyo kwaye zisebenza ngokugqithileyo, ziyahambelana ne-Samsung, i-HTC kunye ne-Motorola.
I-Rom Jelly Bean ye-Android 4.1.1 Codename 3.5.0 yezixhobo ezahlukeneyo
ICodename 3.5.0 yenye yeeROM exhasa izixhobo ezingaphezulu, ngokulandelelana emva kweCyanogen kunye neAOKP.
I-Zombie Panic kwiWonderland iza kwi-Android
Emva kokudlula kwi-WiiWare kunye ne-iOS, iZombie Panic eWonderland iya kwenza ukufika kwayo kwi-Android.
I-Metal Gear Solid: I-Ops yeNtlalontle
Sibona ukusebenza kwentsimbi entsha ye-Metal Gear Solid: ii-Ops zeNtlalontle, isihloko sokuqala samaqonga eselfowuni kwisaga eyenziwe nguHideo Kojima.
I-Samsung Galaxy S, iMackayRom V1.2.3 ye-Android 4.1.1
Ufakelo lwamva nje lweMackayRom V1.2.3, luyimpumelelo, kwaye kule post ndikubonisa ividiyo ngendlela eqengqeleka ngayo kwi-Samsung Galaxy S
Iqela le-C-Rom CM10 ye-Samsung Galaxy S OTA kunye neTouchwiz
Enye iJelly Bean rom, esekwe kwi-CM10 ye-Samsung Galaxy S. Umsebenzi osemgangathweni ophezulu oza kuhlaziya i-terminal yethu kwi-Android 4.1.1
Enchant U, entsha evela kwiGlu Mobile
I-Glu Mobile isukile kwi-Eternity Warriors 2 yaya kwi-Enchant U, utshintsho olukhulu. Ngaba uyafuna ukubona ukuba imalunga nantoni? Funda ngokugqithisileyo.
Ukubuyiswa kwakhona kweNkosana yasePersi kuza kwi-Android
Kuye kwafuneka idlule kwi-XBLA, i-Ps3 kunye ne-iOS ukuya kwi-Android, kodwa sele singayonwabela iNkosana yasePersi.
Indlela yokuqalisa nokufaka kwakhona kwi-LG L3 E-400
Isifundo samanyathelo ngamanyathelo alula sengcambu kunye nokufaka ukubuyisela kwakhona i-Recovery okanye i-ClockworkMod kwi-LG L3 E400
I-Samsung Galaxy Note 2, i-20 yezigidi zeeyunithi kulindeleke ukuba zithengiswe
Isamsung ilindele ukuthengisa ukuya kuthi ga kwiiyunithi ezingama-20 ezigidi ze-phablet yayo entsha ye-Samsung Galaxy Qaphela 2, iphindwe kabini inguqulelo yokuqala yeNqaku
I-Samsung Galaxy S, iRom Miui V4.1 Jelly Bean Muchopoli83 inguqulelo 2.9.7
I-Rom ebalaseleyo yomzuzu we-Samsung Galaxy S, ene-Android 4.1.1 Jelly Bean kunye nomgangatho weeMui roms.
Yintoni esinokuyenza ngekhamera ephathekayo?
Eyona ndlela ingcono yokusebenzisa ikhamera yeselfowuni kwi-Android kukusebenzisa ezinye zezicelo esizicebisa apha
I-Samsung Galaxy Nexus, Gnex Toolkit v7.8, isixhobo esinye sayo yonke into
I-Gnex Toolkit v7.8 sisixhobo sasimahla seWindows esinokwenza nantoni na esifuna ukuyifumana kwiGalaxy Nexus
UnlockRoot, isixhobo sokuncothula inani elifanelekileyo lezixhobo
I-UnlockRoot sisixhobo sasimahla seWindows esinokuthi sincothule okanye sisuse unroot izixhobo ezininzi ezifanelekileyo.
Uhlaziyo olusemthethweni lwe-Android 4.1 Jelly Bean kwi-Samsung Galaxy Qaphela kunye neTab
I-Android 4.1 Jelly Bean iza kwizixhobo ezitsha zeSamsung ngokusebenzisa iiROM ezisemthethweni
Ukumangaliswa: I-Avengers Initiative iqala ngeHulk
Abaphindezeli beza kwi-Android kwisandla seMarvel: Invenative Initiative
UNjingalwazi Layton spin-off ubhengeziwe nge-Android
Unjingalwazi odumileyo uLayton kunye nomfundi wakhe uLuka, abalinganiswa beemidlalo ezininzi zeDS, baya kufika kwi-iOS nakwi-Android.
I-Samsung Galaxy S, iRom RemICS-JB V2.0 kudala ilindelwe
Eyona Jelly Bean Rom ilungileyo kwi-Samsung Galaxy S, imodeli ye-GT-I9000, uthando oluqaqambileyo kwiqela leQela le-RemICS
IMotorola ilungisa i-smartphone engenamda
Amarhe akhomba kwifowuni entsha ye-Motorola ngescreen sokuchukumisa esingenamda
I-Metal Gear Solid: I-Ops ekhethekileyo iza kwi-Android
Singayonwabela i-saga eyenziwe nguHideo Kojima kwi-Android enkosi kwi-Metal Gear Solid: Special Ops
I-Samsung Galaxy SII, iRom SuperNexus - I9100-YAKHA 2 Android 4.1.1
I-Rom ifakwe ngqo kwi-Samsung Galaxy Nexus ye-Samsung Galaxy SII, kuhlobo lwayo lwe-Android 4.1.1 Jelly Bean
Thelekisa phakathi kwe-Samsung Galaxy Note 1 kunye ne-2
Inqaku lokuqala le-Samsung Galaxy lagqama ngokudityaniswa kwezinto ze-smartphone kunye neetablet. Yayiyifowuni ...
I-Sony Xperia T, irhamncwa likaSony ekugqibeleni lityhilwe
U-Sony usandula ukunika intsimbi kwi-IFA 2012 ngokunika i-Sony Xperia T, i-terminal eneenkcukacha ezimangalisayo.
I-Sony Xperia V, i-smartphone entsha yenkampani engenawo amanzi kunye netekhnoloji ye-NFC One Touch
I-IFA 2012 iyaqhubeka ukutshaya.Ngoku lithuba likaSony osandula ukuveza iSony Xperia V, i-smartphone engenamanzi.
I-Samsung Galaxy S, i-Rom MIUI Jelly Bean 2.8.24 ngu-muchopoli83
Eyona miui ye-Miui Jelly Bean rom ye-Samsung Galaxy S, khuphela kunye nendlela yokuyifaka
Umxholo omtsha uhlala ufika kwi-Dead Trigger. Sineenkcukacha malunga nohlaziyo lwamva nje.
Isamsung Samsung Galaxy S, iRom esemthethweni ye-Android 4.1.1 RC10 evela @elitemovil
Inguqulelo yokuqala yeJelly Bean eyamkela imemori khadi yangaphandle ngePC, ngoku iyafumaneka kwi-Samsung Galaxy S.
I-Samsung Galaxy S, i-Rom MIUI Jelly Bean 2.8.17 ngu-muchopoli83
Indlela yokufaka iMui yokuqala ye-Rom kunye nesiseko sebhontshisi yeJelly kwimodeli ye-Samsung Galaxy S yeGT-I9000
I-Sony Xperia J, uluhlu olutsha lokungena lukaSony
I-Sony Xperia J entsha iya kuziswa kwi-IFA 2012 kwaye ithembisa ngowona mgangatho uphezulu kuluhlu olufakwe ngetywina likaSony
I-Nigthly yokuqala yeCyanogenMod 10 (i-Android 4.1.1) ilapha
ICyanogenMod 10 yeNigthly zilapha ngeetoni zezixhobo ezifanelekileyo
Isamsung yazisa i-Samsung Galaxy S Duos, i-smartphone entsha ene-SIM inkxaso
Isamsung isandula ukubonisa imifanekiso yokuqala ye-Samsung Galaxy S Duos, i-smartphone entsha ekumgangatho ophakathi kunye nenkxaso ye-SIM ezimbini.
I-QissMe Rom, iiRom ezinomtsalane zeHTC, Samsung kunye neMotorola
I-QissMe Rom yincwadi yenoveli yemvelaphi yaseTshayina enezinto ezininzi ezinqabileyo kunye nesitayile esibonisa kakhulu.
USony akazukuzisa imidlalo yePSX kwiifowuni eziqinisekisiweyo zePlayStation
Okokugqibela uSony akazukuzisa imidlalo yePlayStation 1 kwiifowuni eziqinisekisiweyo zePlayStation
I-Samsung Galaxy S, i-Rom X-Bean 1.0 yi-XYunknown ye-Android 4.1.1
I-rom entsha yeJelly Bean ye-Samsung Galaxy S, i-rom ebandakanya eyona ilungileyo ye-AOSP kunye ne-CM10
Iifowuni ze-Android ngasekupheleni kuka-2012
Iifowuni ezintsha ze-Android zokuphela konyaka, zezona modeli zilindelwe kakhulu zeenkampani eziphambili
I-Chameleon Launcher Beta, isindululi esikhethekileyo seetafile
I-Chameleon Launcher sisiqalisi esigcwele izinto ezintsha kunye nemisebenzi eya kuthi ibonelele ngohlobo lweThebhulethi yesixhobo se-Android esinezinto ezintsha.
I-Samsung Galaxy S, enye indlela yokufaka ukubuyiswa kweClockworkMod
Enye indlela yokufaka ukubuyiswa kweClockworkMod kwi-Samsung Galaxy S ngaphandle kokusebenzisa iOdin
I-HTC One X ihlaziyiwe kwi-Android 4.0.4
I-HTC ikhuphe uhlaziyo lwe-Ice Cream Sandwich 4.0.4 yabo bonke abasebenzisi be-One X, ukwazisa ukuphucula okubalulekileyo.
IGlasi entsha yeRom V06.3 XXBLG1 ye-Samsung Galaxy SIII (GT-I9300)
Uyifaka njani i-GlassRom v6.3 entsha kwi-Samsung Galaxy SIII
Iqela le-Android Jelly Bean V7.1 ye-Samsung Galaxy S
Kule posi ndibonisa ukuba yeyiphi eyona jelly Bean rom yeyona Samsung Galaxy S, iQela le-Android Jelly Bean rom.
I-HTC Desire S, iRom BlindBean v1.5 Jelly Bean AOKP
Isifundo esilula kunye nesineenkcukacha sokufaka i-rom ephekiweyo kwi-HTC Desire S kwaye uyihlaziye kwi-Android 4.1.1 Jelly Bean
Ukudala iGoldCard kwizixhobo zeHTC
Isifundo esilula ngoncedo lweFosco de HTCmania ukwenza iGoldCard yezixhobo zeHTC.
U-Sony uthengise i-7.4 yezigidi ze-smartphones kwikota ephelileyo
I-Sony isondele kwizigidi ze-8 zee-smartphones ezithengiswe kwikota yokugqibela. Inani elibonisa impilo entle yenkampani.
Ukubuyisela kwakhonaX, faka ngokulula ukubuyisela kwakhona kwiziphelo zeXperia
Isifundo sokufaka ukubuyiswa okulungisiweyo kwinani leetheminali zoluhlu lweSony Ericsson Xperia kunye neRecoverX
Qalisa isigxina sakho kunye neZ4root
I-Z4root sisicelo se-Android esiya kusinceda sincothule iiterminal ezininzi. Ungayikhuphelela apha mahala.
Isifundo esilula sabasebenzisi beHeimdall ukwenza ezabo ii-auto-flash firmwares.
Ouya, ikamva elingaqinisekanga
Waqala ukubetha kakhulu, kodwa kubonakala ngathi imeko ka-Ouya iyamthoba.
Iimfuneko zokukhanyisa i-rom ephekiweyo kwiiterminal zeSamsung
Iingcebiso malunga nendlela yokuqhubeka xa ufaka i-rom ephekiweyo kwiiterminal zeSamsung
Isiqalisi esikhulu se-2.0, yenza ngokwezifiso i-Android yakho ngokukhululeka
Yenza ii-icon zakho ngokwezifiso kunye nokufikelela kwi-Android nge-Big Launcher 2.0, indlela entle nenemibala yokunika isazisi sakho okanye ithebhulethi.
UJelly Bean ubhengeze iifowuni ze-HTC One
I-HTC iqinisekisile ukuba balungiselela ukukhupha i-Android 4.1 Jelly Bean kwiifowuni ezahlukeneyo zeHTC One.
Uyicwangcisa njani ngokuchanekileyo i-GPS kwii-terminals ze-Samsung
Ukufundisa ividiyo ngokulula ukumisela nokwandisa i-GPS yee-terminals ze-Samsung ngenkqubo yokusebenza ye-Android.
Iqela le-Android Jelly Bean ye-Samsung Galaxy S
Ukusuka kwiqela leqela le-Android Jelly Bean, sifumana eyona rom yomzuzu ye-Samsung Galaxy S yethu, i-rom esebenzayo nekhawulezayo.
Elite Iqela leJelly Bean Rom ye-Samsung Galaxy S
I-Beta 3 ye-Jelly Bean rom ye-Samsung Galaxy S eyenziwe liqela lokupheka le-Elite.
I-RTVE kunye neSuperPaquito, iipilisi zabantwana ezine-Android
Imakethi ye-Android iyaqhubeka nokwanda ngamacwecwe abantwana ayilelwe ukusebenzisa ithuba labasebenzisi abancinci ekhaya
Uyifaka njani iHeimdall kwiLinux
Uyifaka njani iHeimdall ukukhuphela iiterminal zosapho zeSamsung kwiinkqubo zokusebenza kweLinux
I-rom yokuqala yeJelly Bean nguDerTeufel1980 ye-Samsung Galaxy S (GT-I9000)
Isifundo esilula sokwazi ukuba uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy S yakho kwi-Android 4.1 Jelly Bean usebenzisa i-rom ephekwe nguDerTeufel1980
Uyifaka njani i-ClockWorkMod Recovery kwi-LG Optimus 3D
Isifundo esilula kubandakanya zonke izixhobo, kwindlela yokufaka ukubuyiswa kweClockWorkMod kwiLG Optimus 3D.
Njani ukuba unyothule LG Optimus 3D
Isifundo esisebenzayo sendlela yokucothula i-LG Optimus 3D ngendlela elula sisebenzisa iWindows PC kunye nesixhobo seMegatron.
Isikhokelo somsebenzisi seHTCdev
Isikhokelo esisebenzayo sendlela yokusebenzisa iwebhusayithi ye-HTCdev, onokuthi uvule ngayo i-bootloader yenani elifanelekileyo lezitishi ze-HTC
I-Sony Xperia ifumana amabhaso ama-5 abomvu
Umgca weSony Xperia weefowuni eziphathwayo kunye nezinto ezincedisayo ziphumelele amabhaso ama-5 kumawonga amachaphaza abomvu ka-2012
Uyifaka njani iMbuyekezo kwi-Samsung Galaxy Tab p1000n
Uyifaka njani i-ClockworkMod Ukubuyisela kwi-Samsung Galaxy Tab p1000n
Uyisebenzisa kanjani iHeimdall kwiWindows
Isifundo sendlela yokufaka iHeimdall kwiWindows. IHeimdall yenye inkqubo eya kwi-odin eya kusinceda ukuba sikhanyise i-GT-i9000
Uyifaka njani kwi-tab ye-Samsung Galaxy 7 ″ ngale ndlela yoyisa
Ungayifaka njani i-Samsung Galaxy tab 7 "okanye i-p-1000 kwi-Android 2.3.3, uyisuse kwaye uyifakele iRefired Recovery.
I-Samsung Galaxy S 3, indlela yokufaka kunye nokufaka ukubuyiswa kweClockworkMod kwinyathelo elinye
Isifundo esilula sokufaka ukubuyiswa kweClockworkMod kwi-Samsung Galaxy S 3 nge-odin 3.04
I-Samsung Galaxy S, i-Rom Gnex Stock 1.4.1 i-Android 4.04 yi-Elite
I-Stock emsulwa eyi-Gnex 1.4.1 yinguqulelo yamva nje ye-Elite rom ye-Samsung Galaxy S okanye i-GT-i9000.
Dibana nohlobo olucacileyo lweGoogle Chrome, yeJelly Bean kunye ne-ICS
I-Google Chrome ihlaziywa kuhlobo oluchazayo ukusuka kwi-beta, ukusuka kwi-Android 4.0 ukuya phezulu, ukubonelela ngesantya esikhulu
I-Nexus Q ikhuphela umxholo wakho kwiGoogle Play ukuya kwizikrini kunye nezithethi
UGoogle uzisa i-Nexus Q, iziko lemultimedia elihlala lixhume kuGoogle Play ukudlala iaudiyo nevidiyo kwizithethi neethelevishini
ICyanogenMod 9 isungula i-RC yayo yokuqala yezixhobo ezininzi
ICyanogenMod 9 isandula ukumilisela i-Android 4.0 RC yokuqala esebenzayo yenani elifanelekileyo leetheminali ze-Android.
Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy Tab 7 ″ (p-1000) kwi-Android 4.0
Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy Tab kwi-Android 4.0.4 ngokukhanyisa i-CyanogenMod 9 Nigthly eyakha i-rom.
Indlela yokuqalisa kunye nokufaka ukubuyiswa kweClockworkMod kwi-Samsung Galaxy tab p1000
Inyathelo ngenyathelo lokufundisa ngemifanekiso neengcambu kwaye ufake i-ClockworkMod Recovery kwi-Samsung Galaxy Tab, imodeli p1000
I-Rom ICS F4k MOD v4.0.4 r4 IMM76I kunye neLinaro ye-Samsung Galaxy S
I-F4K isinika i-rom yokuqala ye-Samsung Galaxy S kunye nokuphuculwa kwekhowudi yeLinaro.
I-Smart Watch: Iwotshi ekrelekrele kaSony
I-Sony Smart Watch iyaqhubeka ithengiswa kwiwebhusayithi esemthethweni efanayo nge-euro ezili-129 kuphela, ngenkqubo yokusebenza ye-Android nokunye okuninzi.
Indlela yokutshintsha i-Samsung Galaxy mini uthotho nge-odin yokukhuphela izinto ezininzi
Isifundo sevidiyo ngendlela yokukhanya kwe-Samsung Galaxy mini uthotho lwee-smartphones ezine-odin yokukhuphela izinto ezininzi.
Uluhlu lwe-Samsung Galaxy Tab luya kufumana i-Android 4.0 kwiiveki ezizayo
Isamsung iqinisekisile ukuba ukusukela ngoJulayi bazokwazisa i-Android 4.0 Ice Cream Sandwich kwiimveliso ezahlukeneyo zoluhlu lweGalaxy Tab.
Qiss me you new rom kunye neenguqu
Qiss me ziirom eziguqukayo ezinemvelaphi yaseTshayina ezifumanekayo kwizixhobo ezahlukeneyo ze-Android, kubandakanya neGPS S
Indlela yokufaka ii-terminals ze-Samsung kunye nenkqubo yokusebenza ye-Android
I-Sammobile liphepha lewebhu elinikezelwe kuzo zonke izixhobo ze-Samsung, apho sinezixhobo ezibengezelayo ezikhoyo.
Uhlaziya njani i-Samsung Galaxy S kwi-CM9 ebusuku
Inkqubo echanekileyo yokuhlaziya i-Samsung Galaxy S kuhlobo olutsha lwe-CM9 ebusuku.
I-THD N2-A, ikopi yeMacBook ene-Ice Cream Sandwich
Imodeli ye-THD N-2 ikopi yeMacBook esebenza ukubonelela ngemodeli yeLaptop enemibala kwaye isebenza, isebenza phantsi kwe-Android 4.0
I-MOD TouchWiz 4 Launcher v2 - GB, CM7, ICS ye-Samsung Galaxy S
Isiqalisi seTouchWiz 4 V2 seSamsung ye-Samsung S, iphakheji enesiqalisi esiguquliweyo esinokufakwa ekubuyiseni.
I-Sony Xperia tipo, i-smartphone entsha yakwa-Sony ene-SIM ezimbini
U-Sony usandula ukubhengeza i-Sony Xperia tipo, i-smartphone ekumgangatho ophakathi evelele inkxaso yayo ye-SIM ezimbini.
Million Moments, enye indlela yeSony yeefoto zakho
Amaxesha ezigidi sisicelo sikaSony esikhawulezisa inkqubo yokulungiselela iifoto ukuze usoloko unegalari engenachaphaza.
I-Acer Iconia Tab A700: ukumiliselwa okusondeleyo ngomboniso opheleleyo we-HD
I-Acer Iconia Tab A700 yithebhulethi yokuqala ye-Android esungulwe nge-IPS Full HD screen
Umnqweno weHTC, faka i-Android 4.03 nge-fallout rom
Yonwabela uguqulelo lwamvanje lwe-Android kwi-HTC Desire, indlela yokwenza okunokwenzeka kweyona nto idume nge-smartphone yaseTaiwan
Indlela ukuba unyothule Samsung Galaxy S2
Isifundo esisebenzayo nayo yonke into oyifunayo ukuyisusa i-Samsung Galaxy S2, okanye eyaziwa ngokuba yi-GT-i9100.
Iimpawu-UX yeyona nto intle ye-Samsung Galaxy S
Iimpawu-UX yeyona rom intle yomzuzu we-Samsung Galaxy S, esekwe kwi-CM9 ebusuku kwaye ineemods ezininzi ze-Samsung Galaxy SIII
Isamsung yazisa i-Music Hub eSpain, kuphela kwi-Galaxy S III
Nge-Music Hub inkampani yaseKorea i-Samsung izakuzama ukukhuphisana ne-iTunes kunye ne-Spotify kwicandelo lomculo ngokusasaza.
Indlela ukuba unyothule Samsung Galaxy S3
Isifundo esisebenzisekayo esinemifanekiso yendlela yokucothula i-Samsung Galaxy S3, ngendlela elula nelula.
Ungazilungisa njani iingxaki zesithuba kunye nokuvalwa okunyanzelekileyo kwii-roms ze-ICS nge-Samsung Galaxy S. Oku kuhlala kunengxaki yokwahlula idatha
Uyifaka njani iClockworkMod Ukubuyisela kwi-Samsung Galaxy R i9103
Inyathelo ngenyathelo lokufundisa ngendlela yokufaka kwakhona kwi-Samsung Galaxy R okanye eyaziwa njengeGT-i9103
Khuphela i-rom Samsung Galaxy S Doc's Master ICS V12
Khuphela i-Doc's Master ICS V12 rom kunye nenyathelo ngenyathelo ngenyathelo lokufundisa kwi-Samsung Galaxy S.
I-Samsung Galaxy S3 i-firmware epheleleyo iyafumaneka
I-firmware epheleleyo ye-Samsung Galaxy S3 iyafumaneka, apho abaphuhlisi baya kuthi bahambise isoftware yabo baye kwezinye iimobile
Indlela ukuvula Samsung Galaxy mini ngokupheleleyo simahla
Isifundo esilula ukuvula i-Samsung Galaxy mini simahla, ukufumana inkqubo yokuvula ikhowudi enamanani asibhozo
Uyivula njani i-bootloader yenani leeterminal zeHTC ngeHTCdev
I-HTCdev liphepha lewebhu apho emva kokubhalisa, sinokuzikhuphelela izixhobo eziyimfuneko ukuvula i-bootloader.
IHTC Ville C entsha, ingxelo yezoqoqosho ye-One S
Ukucaciswa kweHTC Ville C, uhlobo olungabizi kakhulu lweHTC One S, enesikrini se-4.3 kunye ne-ultra thin, sele ivuza.
I-Samsung Galaxy S, ungayitshintsha njani imodem kwii-roms esekwe kwi-ICS
Isifundo esilula sokutshintsha imodem kwi-Samsung Galaxy S, okanye eyaziwa ngokuba yi-GT-I9000, kubandakanya zonke izixhobo eziyimfuneko zokwenza.
Indlela ukuba neengcambu kwaye ufake ClokworkMod Recovery kwi Huawei u8650
Ungayifaka njani ingcambu kunye nokufaka ukubuyiswa kweClockworkMod kwiHuawei u8650, inyathelo ngenyathelo lokufundisa ngemifanekiso.
Iqela leRom Lightning: IHuawei U8650
I-Rom ye-Huawei u8650 esekwe kwi-Android 2.3.5, i-rom ekunika isantya sokuqhubekeka kunye namava wokubamba.
I-Huawei u8110, indlela yokufaka kunye nokufaka i-ClockworkMod Recovery
Isifundo esisebenzayo sokufaka ukubuyiswa kweClockworkMod kunye nengcambu yeHuawei u8110, kubandakanya zonke izixhobo eziyimfuneko.
Ngokukhawuleza Scribble yeGalaxy Note: hlela amaxwebhu akho efini
Gcina kwaye wabelane ngamaxwebhu akho kwilifu elikhawulezileyo kwaye uwahlele ngombulelo kwiGalaxy Note kunye ne-Soonr Scribble.
Isifundo esisebenzayo kubasebenzisi bee-roms ze-ICS kwi-Samsung Galaxy S. Ngokuhlela ifayile yokwakha.prop, siya kufumana iViber ukuba isebenze kakuhle.
Inyathelo ngenyathelo lokufundisa ukuvula iimodeli ezahlukeneyo zefowuni yosapho lweSamsung S, usebenzisa iGlass S Unlock, iApp yasimahla kwiVenkile yokudlala.
I-Samsung Galaxy S, iRom Dark Knight 5.5
Uhlaziyo lwamva nje lwe-Dark Knight ICS ye-Android 4.0.4 rom ye-Samsung Galaxy S.
I-Samsung Galaxy S, XXJW4 yexabiso lokuhlaziywa kwepakethe efumanekayo yeOdin
Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy S kwi-android 2.3.6 XXJW4 usebenzisa i-Odin yeewindows. I-XXJW4 luhlaziyo olukhulu oluninzi oluphuculweyo
I-Samsung Galaxy S, uyifaka njani i-Rom ngendlela ecocekileyo
I-Samsung Galaxy S, inkqubo emayilandelwe ukwenza ufakelo olucocekileyo lwe-Rom, inyathelo ngenyathelo lokufundisa ngemifanekiso.
Ukulindelwa malunga nokuqaliswa kwe-Samsung Galaxy S3 kumsitho ongafakwanga, kunye neprosesa yayo entsha ye-Exynos 4 Quad.
I-Rom Samsung Galaxy S Android 4.0.3 Elite 9.1 (ICS)
Uyihlaziya njani ngokusemthethweni i-Samsung Galaxy S kwi-Android 4.0.3 usebenzisa i-Elite Rom, ngakumbi i-9.1.
I-Samsung Galaxy S, hlaziya nge-odin kwi-firmware 2.3.6 kunye neCF Root yayo
Isifundo esilula sichaze inyathelo ngenyathelo kunye nemifanekiso yokuhlaziya ngokungafanelekanga i-Samsung Galaxy S kwi-Android 2.3.6 JVU.
I-HTC iya kubandakanya i-LogMeIn Rescue kuzo zonke izixhobo zayo ze-Android
I-HTC inokubandakanya i-LogMein kuzo zonke izixhobo zayo ze-Android, xa kukhutshwa i-HTC ifuna ukufumanisa kude iingxaki zesicelo.
Isamsung ipapasha uluhlu lwayo lokuhlaziya
Nangona sele iinyanga okoko i-Ice Cream Sandwich yakhutshwa nguGoogle. Kuphela yi-1% yezixhobo ze-Android ezonwabela le nguqulo. Oyena nobangela woku kulibaziseka ngabavelisi, abathi, ngenxa yokulungelelanisa nokwenza ngokwezifiso uguqulelo lwamva nje lwe-Android kwi-Smartphone yabo kunye neetafile, balibazisa umhla wokuhlaziywa kwezixhobo zabo, ngokubala kwi-Smartphone okanye kwiThebhulethi yakho ekwaziyo ukuyivuselela. Isamsung ilwenzile ngokusemthethweni uluhlu lwezixhobo eziza kukwazi ukuphucula ukusuka kwi-Gingerbread ukuya kwi-Ice Cream Sandwich kule nyanga.
I-LG iveza isisombululo esitsha sokutshaja ngaphandle kwamacingo kwii-smartphones zayo
Abakwa-LG bazise kule veki kwi-MWC 2012 isiseko sokutshaja ngaphandle kwamacingo, imodeli entsha ebhaptizwe njenge-CMR-800
Ukusetyenziswa kakhulu kwebhetri? Ingcaciso nesisombululo.
Kwinqaku lanamhlanje ndiza kukunika inkcazo yesinye sezizathu (ezinokwenzeka rhoqo) kunye nesisombululo kwingxaki yokusebenzisa ibhetri ngequbuliso. Ukushwankathela, oyena nobangela woko kuphuma kwebhetri phantse kwangoko sisiphoso seCPU.
I-QualComm ifundisa izakhono zeprosesa yayo entsha ye-Snapdragon S4
I-Qualcomm iphuhlisa iprosesa ye-S4 yee-smartphones okanye izixhobo eziphathwayo, ezinesakhono sokuphucula kakhulu ikhamera.
Amarhe: Umfanekiso we-Samsung smartphone entsha kwiNkomfa yeHlabathi yeFowuni.
Umfanekiso omtsha uza kukhanya, ekucingelwa ukuba ngowokugqibela we-Samsung oza kuwubonakalisa kwiNkomfa yeHlabathi yeFowuni elandelayo
Iindaba zabadlali bebhola (I). Ukudlala iPSP kwi-Android?
AbakwaSony bakuphawulile oku kukhula kwimveliso yevidiyo. Sele ikwenzile ukukhutshwa kweXperia Play, yazisa umxholo we "console-phone" kwaye ngoku iyaphinda. Ukusukela, uSony uya kukhupha iinguqulelo zemidlalo yevidiyo yePSP kuluhlu lonke lwezixhobo ze-Android.
Ibhetri ehlala ihlale kwaye ihlala ...
Ihlala ixesha elingakanani ibhetri ye-Smartphone yakho? Iiyure ezili-12 ... usuku olu-1 ngokungenantsingiselo? Enye yeengxaki zokuba ne-Smartphone enamandla kunye nokusetyenziswa okuninzi kunye nezixhobo kukusetyenziswa kakhulu kwebhetri. Kungenxa yoko le nto kwiivenkile ezikwi-Intanethi sinokufumana inani elikhulu leebhetri ezizezinye kwi-Smartphone yethu ye-Android. Namhlanje ndiza kuthetha ngebhetri ngeyona ndawo inamandla endiyifumeneyo.
Imemori yefowuni igcwele? Ziye phi zonke ezo MB / GB zesixhobo sam?
Kutheni, ukuba i-Smartphone okanye iThebhulethi ine-X MB / GB yememori, ndinenxalenye encinci yokufaka usetyenziso? Kutheni inkumbulo yam igcwalisa ngokukhawuleza ukuba isixhobo sam se-Android sine-X GB? Namhlanje ndiza kuchaza isizathu salo msitho kwaye unegama: AMACANDELO.
Icebo lokwandisa ubomi bebhetri liya kuba yinkohliso
Ayingawo onke "amaqhinga" okanye iingcebiso zokunyusa ubomi bebhetri eziyinyani, uninzi lwazo zizinto zokukhohlisa, njengale ndiza kuthetha ngayo kweli nqaku.
Uvavanyo lweSony Ericsson Xperia Ray (I)
Enkosi kubafana abavela kwaSony Ericsson sikwazile ukuba neXperia Ray iiveki ezimbalwa, ngexesha ...
Ithebhulethi yakwaSony P: U-Sony usungula ithebhulethi yakhe yesibini e-United Kingdom
Ithebhulethi yakwaSony P: U-Sony ukhuphela i-United Kingdom, ithebhulethi yayo yesibini, enoyilo olutsha kunye nohlaziyo, iyasimangalisa ngethebhulethi eyahlukileyo
I-HTC ivula i-bootloader ye-Wildfire, ye-Wildfire S kunye neMinqweno.
I-HTC iphinda ihlaziye uluhlu lwee-mobiles ezihambelana nokuvula i-bootloader eyaziwayo, ngoku i-HTC Wildfire, i-Wildfire S kunye noMnqweno zinokonwabela ukufikelela kwiingcambu.
Isamsung ayizukuyihlaziya i-Galaxy S yayo nayiphi na ipakethi yexabiso
Isamsung kwisiteyitimenti sayo sesithathu igqiba ekubeni ingafaki nayiphi na ipakethi yexabiso kwi-Samsung Galaxy S okanye kwithebhulethi yayo yeGalaxy Tab, ngokwesiteyitimenti sayo esisemthethweni ngenxa yokuncipha kwezixhobo
Isamsung inombono wekamva ngemiboniso eguqukayo
Isamsung isibonisa umxholo wevidiyo kunye noko kulindelweyo kwitekhnoloji yethebhulethi kule minyaka izayo nendlela enokusetyenziswa ngayo.
Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy Tab 10.1 (Icandelo lesibini)
Ukuphononongwa kwesoftware efakwe kwi-Samsung Galaxy Tab 10.1.
I-Samsung Galaxy SII vs IPhone 4S, uvavanyo lokunyamezela
Uvavanyo lokumelana nokothuka phakathi kweSGSSII kunye ne-IPhone 4S
Nawe, imidlalo emininzi yeXperia Play… kwaye isimahla
Nangona i-Sony Ericsson Xperia Play i-smartphone / ividiyo yomdlalo wekhonsoli yagxekwa ngokubanzi emva kokumiliselwa kwayo, inyani kukuba ...
Iitafile zikaSony zika-Android sele zithengiswa eSpain.
Ivenkile yeePrimiyamu zeSamsung: Ivenkile entsha ye-Android.
I-Sprint izisa iGingerbread kwi-LG Optimus S yayo, inguqu yayo ye-LG Optimus One
Uhlaziyo lwe-Sprint lwe-Gingerbread kuhlobo lwayo lwe-LG Optimus One ye-Optimus S.
I-Samsung Galaxy S2, i-smartphone enezixhobo ezikhawulezayo zemizobo
I-Samsung Galaxy S2, i-smartphone enezixhobo ezikhawulezayo zemizobo.
U-Sony Walkman Z, umdlali wemultimedia ene-Android 2.3 Isonka sejinja
U-Sony Walkman Z, umdlali wemultimedia ene-Android 2.3 Isonka sejinja.
I-Sony Ericsson Xperia Dlala i-4G, ukusuka kwisandla se-AT & T.
I-Sony Ericsson Xperia Dlala i-4G, nge-AT & T.
I-Android 2.3.6 Isonka sejinja kwi-Nexus S kunye nokuqala kokuvela kwabasebenzisi
I-Android 2.3.6 Isonka sejinja kwi-Nexus S kunye nokuqala kokuvela kwabasebenzisi.
Sivavanye i-LG Optimus 3D (III)
Uvavanyo lwe-LG Optimus 3D
Sivavanye i-LG Optimus 3D (II)
Ngoku ungavula i-HTC Sensation
I-HTC ineenkcukacha ezinomdla kakhulu kubasebenzisi ngokuququzelela ukuvula i-bootloader yazo zonke izixhobo zabo….
Isamsung SGH-i927: I-Galaxy 2 enebhodi yezitshixo yeQWERTY
Isamsung SGH-i927: I-Galaxy 2 enebhodi yezitshixo yeQWERTY.
Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (III)
Inxalenye yesithathu yoPhononongo lweGlass S Player ene-Android 2.2
Ukuvavanya i-HTC ChaChaCha (III)
Inxalenye yesithathu kunye neyokugqibela yokuphononongwa kwesiphelo seHTC. Emva kwenxalenye yokuqala apho sivavanye khona izixhobo zekhompyutha kunye ne ...
I-Motorola Atrix ihlaziywa kwi-Android 2.3.4 ye-Gingerbread
I-Lenovo IdeaPad K1: I-Android 3.1 kunye neprosesa engundoqo
I-Lenovo IdeaPad K1: I-Android 3.1 kunye neprosesa engundoqo.
Ukuvavanya i-HTC ChaChaCha (II)
Inxalenye yesibini yoVavanyo lweHTC ChaChaCha
Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (II)
Inxalenye yesibini yeGlass S Player Wifi 5.0 uphononongo
Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (I)
Isamsung yeSamsung S Player 5.0 Wifi Media Player Unboxing
Uphononongo lwe-LG Optimus Black (II)
Emva kwenxalenye yokuqala apho sithetha khona malunga nenxalenye ebonakalayo yesiphelo, izixhobo zekhompyuter kunye nezinto, kule ...
IHTC Sensation Vs LG Optimus 2x
Thelekisa i-LG Optimus 2x kunye ne-HTC Sensation
I-Sony Ericsson Xperia Active, i-smartphone engenamanzi ene-Android 2.3 Isonka sejinja
I-Sony Ericsson Xperia Active, i-smartphone engenamanzi ene-Android 2.3 Isonka sejinja.
Uvavanyo lweHTC Sensation (III)
Inxalenye yesithathu yovavanyo lweHTC Sensation
I-Huawei MediaPad, ithebhulethi entsha ene-Android Honeycomb kunye ne-processor-core processor
I-Huawei MediaPad, ithebhulethi entsha ene-Android Honeycomb kunye ne-processor-core processor.
ISony Ericsson TXT Pro, iselfowuni kubathandi benethiwekhi
ISony Ericsson TXT Pro, iselfowuni kubathandi benethiwekhi.
Ukuvavanywa 2the LG Optimus 2x (III)
Inxalenye yesithathu yokuhlaziywa kwe-LG Optimus 2x
Sivavanye i-HTC Wildfire S (III)
Inxalenye yesithathu yovavanyo lwe-HTC Wildfire S
Imidlalo ebekelwe bucala ekhutshelwe iSony Ericsson Xperia Play
Bakhupha imidlalo ekhethekileyo ye-Sony Ericsson Xperia Play.
I-LG Optimus Pad ifika eSpain ngokukodwa kunye neVodafone.
I-LG Optimus Pad ifika eSpain ngokukodwa kunye neVodafone. Uncediso-mali lomntu ngamnye, lwabasebenza ngokukhululekileyo kunye neenkampani.
IArnova 7 kunye neArnova 84 Iitafile ezibetha ezivenkileni nakulo lonke uhlahlo-lwabiwo mali.
Kungekudala bazakufumaneka kwi-RRP ye- € 99 kunye ne- € 129 ngokwahlukeneyo, kuzo zonke i-El Corte Inglés, MediaMarkt, Saturn, Ifowuni yeNdlu, i-Eroski, iLeclerc kunye namaziko ePixmanía eSpain.
Ikhibhodi yeHacker, ikhibhodi yeetafile.
Iikhibhodi zebhodi yezitshixo yeepilisi zeepilisi ze-Android
Imouse yeLebhu yeLogitech: Imouse yeBluetooth yeeTablet ze-Android 3.1
Imouse yeLebhu yeLogitech: imouse yeBluetooth yeepilisi ezine-Android 3.1.
Ifowuni ye-Sharp Aquos SH-12C, i-3D entsha ye-smartphone yejapan
Ifowuni ye-Sharp Aquos SH-12C, i-3D entsha ye-smartphone yeJapan.
Ukucaciswa kweMotorola Droid X2 kuvuwe
Ukucaciswa kweMotorola Droid X2
Ukunikezelwa kwe-Xperia Mini kunye ne-Xperia Mini-Pro
Ukuboniswa kweSony-Nokia yemodeli entsha yeXperia Mini kunye neXperia Mini Pro
Ukuhlawuliswa kwe-Samsung Droid, amanqaku e-smartphone entsha
Ukuhlawuliswa kwe-Samsung Droid, amanqaku e-smartphone entsha.
Inxalenye yesibini yovavanyo lwe-HTC Desire S
Ezona 7 zii-Smartphones ezilula ze-Android ukuba zizame, ngokweMagazini enentambo
ILebhu yeGajethi, kwiwebhusayithi enamaphephancwadi, ikhethe ii-smartphones ezisixhenxe ze- "hackable" ze-Android kwintengiso.
Ukuvavanya i-HTC Desire S (I)
Enkosi ku-HTC sibe nethuba lokuvavanya i-HTC brand esandula ukukhutshwa, iHTC ...
Uphengululo lweHTC Incredible S. Sivavanye kuqala.
Uvavanyo lwesiphelo seHTC esimangalisayo.
Ukuzaliswa kweNtsha kweSamsung, kunye nekhibhodi yeQwerty. I-Android 'eluhlaza'. Ithengiswa ngumphathi we-US Sprint ukusukela nge-8 kaMeyi
Namhlanje sifuna ukukuxelela ngemveliso entsha exhotyiswe nge-Android: i-Andi-One yolawulo olukude.
Ukusukela ngale ntsasa yangoLwesihlanu ngo-Epreli 9, iAcer Iconia A500 yeCwecwe ngoku iyafumaneka kwiBestBuy.com yokubhukisha, ngexabiso leedola ezingama-450. Nge-Android 3.0
Izolo, inkampani yaseBarnes neNoble ibhengeze ukuba iyakuvumela usetyenziso lwe-Android ukuba lusebenze kwi-Nook Colour e-reader yayo.
Qalisa i-Samsung Galaxy S (GT-i9000), ene-2.3.3 yeGingerbread
Isifundo sokufumana ukufikelela kweengcambu nge-Android 2.3.3 ye-Gingerbread ROM ye-Samsung Galaxy S GT-i9000. Ikhowudi XXJVK, kunye neOdin. I-kernel esisiseko.
Ukuvuselelwa ngokusesikweni kweGingerbread 2.3.3 Uhlaziyo lweSamsung Galaxy S
I-Gingerbread esemthethweni ye-Android Gingerbread 2.3.3 ROM ye-Samsung Galaxy S ikhutshiwe.Yakha ikhowudi XXJVK. Imiyalelo yokufaka.
Ingcambu kwi-HTC yeThunderbolt kwi-1 cofa
U-Sony Ericsson ubhengeze ukuba uza kukhupha uhlaziyo lwenkqubo yokusebenza kwefowuni ye-Xperia X10 kwi-Android 2.3 ye-Gingerbread.
Amarhe: U-Sony angazisa i-Vaio netbook ngeGoogle Chrome OS
Inkampani yakwaSony izakuphuhlisa ilaptop yakwaSony Vaio Vaio eneGoogle Chrome OS kunye neprosesa yeNVIDIA Tegra 2.
UToshiba uthi iThebhulethi yakhe eNtsha ye-Android ibhetele kune-iPad2
UToshiba ubanga ukuba ithebhulethi yakhe entsha ye-Android iya kuba ngcono kune-iPad2. Ngeempawu ezingcono. Ixabiso liya kufana ne-iPad2. Ufuna ukuba ngumbulali we-iPad.
Ubuntu osebenza kwi-Motorola Atrix
Izibuko lobuntu le-Motorola Atrix
Inkampani yaseMexico iKyoto isungula eyayo ithebhulethi ye-Android
Inkampani yaseKyoto, yaseMexico, iphehlelele i-M902 yeCwecwe, kwaye inokuthengwa kwiivenkile zamaXabiso amaXabiso kwiipeso ezingama-2 300 zaseMexico (ngaphantsi kwee-euro ezingama-135).
I-LG Optimus One ihlaziywa kwi-Android 2.3 ye-Gingerbread
Abakwa-LG babhengeze ukuba ngoMeyi olandelayo i-LG Optimus One smartphone iya kufumana uhlaziyo lwenkqubo yokusebenza kwefowuni kwi-Android 2.3 Gingerbread
I-Asphalt 5 HD kunye neNOVA HD yasimahla kwiiSoftware zeSamsung
I-Asphalt 5 yasimahla kunye neNOVA kwiApple yeSamsung
I-Airis OnePAD, ithebhulethi ye-Android eyenziwe eSpain
Ngaphandle kwento yokuba phantse onke amacwecwe abaluleke kakhulu akhutshelwa ukuthengisa ahlala efika eSpain, ...
I-Xtreamer PVR, iZiko leMultimedia nge-Android.
Iziko leXtreamer PVR leMultimedia nge-android, eboniswe eCebit nakwikamva emakhayeni ethu.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo sikuxelele ngamacwecwe amatsha inkampani yeCoby eyayiceba ukumilisela kulo nyaka. Kulo nto…
I-Samsung Galaxy Mini, yazisa
Izolo sikubonise imifanekiso ye-Samsung Galaxy Pro kwaye sikubonise imifanekiso yayo yokuqala. Kodwa ayisiyiyo yodwa le ...
IHottoo yeHTC. Lowo ulibalekileyo.
Imbali ye-HTC kunye neTattoo kunye nendlela yokuhlaziya kwi-Android 2.1 okanye nayiphi na i-Android engazange ize
UGameloft ubhengeza imidlalo eli-10 kwiXperia Play
Imidlalo yokuqala ye-Gameloft iya kubakho kwi-Xperia Dlala ngala mhla ikhutshwa ngawo
IMotorola izisa i-Motorola Pro yayo
IMotorola iboniswe izolo ngoFebruwari 14 kumdlalo weBarcelona MWC imodeli yayo kunye nekhibhodi ebonakalayo ye-Motorola Pro ...
Iindaba zeSony-Ericsson kwiNkomfa yeHlabathi yeSelfowuni kwiBarcelona ngo-2011
Vula Umnqweno yakho HTC simahla!
Mahala Umnqweno yakho HTC nge khompyutha yakho kunye USB
Thatha ikhibhodi yakho yeGalaxy Tab entsha
Ukunyuselwa kukaSamung kunika ikhibhodi yeGalaxy Tab.
I-Samsung Galaxy Ace kunye ne-Samsung Galaxy Mini, ii-smartphone ezimbini ze-android eSpain
Isamsung yaseSpain ibhengeza ukufika kweefowuni ezimbini ezintsha ze-Android, i-Galaxy Ace kunye neGPS Mini
IMotorola Xoom, iNombolo yeModeli, amaXabiso amaXabiso, kunye nokuKhutshwa kweHoneyComb SDK
Ithebhulethi ye-Motorola Xoom yimveliso esemgangathweni kwaye ke ixabiso layo liya kuhambelana nalo mgangatho, ukongeza i-HoneyComb SDK iza kufika kwiiveki ezimbalwa
Ifowuni yokuqala ye-Android yokuba neekhibhodi ezimbini ezibonakalayo, i-Motorola i886 iguqulelwe ukusetyenziswa kwenethiwekhi ye-US Spint-Nextel IDEN.
Nangona i-Aigo (Altek Leo) iveza i-A8 yayo njengekhamera yedijithali enefowuni edityanisiweyo, inyani kukuba, ukugweba ngemifanekiso, kusondele ekubeni yifowuni yekhamera yedijithali.
I-Recon GPS Ski Goggles ene-Android kunye neBluetooth
Iiglask ski zeGPS ezenziwe yinkampani iTrascend ngesandla seRecon Instruments, zixhotyiswe ngeprosesa ye-ARM9 esebenza nenkqubo yokusebenza ye-Android
Iparrot Asteroid, ilungele imoto yexesha elizayo
I-Parrot isungula iziko layo lemultimedia kwimoto ebandakanya inkqubo ye-Android kwinguqu yayo ebizwa ngokuba yiFroyo.
IMotorola Xoom igcine ezinye iimfihlo kuthi, zifumanise
I-Motorola Xoom igcine ezinye iimfihlo, njenge-barometer, eyenza le thebhulethi ye-android igqibelele namhlanje.
I-Samsung 4G LTE, enye i-smartphone enkulu ye-Android evela kwiVerizon
Sele sikuxelele nge Motorola Droid Bionic, iselfowuni ebonelela ngoqhagamshelo kwinethiwekhi ye-4G LTE ye ...
UDell Streak 7-intshi yeethebhulethi ene-Android esele ibonisiwe
UDell uveze ithebhulethi yakhe entsha nge-android, i-Dell Streak 7 eya kuthi ifike kwiimarike kungekabi mva kakhulu kwaye eya kuqala isebenze nohlobo lwe-Android 2.2 kwaye iphinde ihlaziye kwiGingerbread.
Isamsung isothusa kwi-CES kunye neemveliso zayo zeGoogle TV
Isamsung isothusa kwi-CES ngentetho yomdlali weBlu-Ray ngeGoogle TV kunye nebhokisi ethile yeli qonga
Smile Spriiing, i-Android enebhodi yezitshixo eThailand
U-Huawei uzamile ukusothusa (kwaye inkwenkwe iphumelele) nge-smartphone yayo entsha ye-Android, iSmriiing Smile
I-Htc Thunderbolt ibonisiwe, i-HD Desire enekhamera yangaphambili
I-Htc Thunderbolt ekugqibeleni ibonisiwe nangona ibandakanya izinto ezimbalwa zobugcisa esingazaziyo. ngokusisiseko yi-Desire HD enekhamera yangaphambili.
IMotorola izisa ithebhulethi yayo yeXoom ngeHoneyComb kwaye ixhaswe nguGoogle
Namhlanje ibiyimini kwaye iMotorola ivelise itablet yayo ye-Android ebizwa ngokuba yiXoom eza kuza nohlobo lweHneyComb kwaye iya kuxhaswa nguGoogle.
IMotorola Atrix 4G, eyona nto iphambili kuyo, i-1Gb ye-Ram kunye ne-4-intshi ye-QHD yesikrini. Akusekho nto inokuthethwa
IMotorola Atrix 4G ayisiyiyo nayiphi na i-smartphone, iyiselfowuni ebalaseleyo ebandakanya isiseko esiphambili, isikrini se-4-intshi ye-QHD kunye ne-1Gb ye-RAM
ISony Ericsson Xperia Arc ligama lokugqibela eliza kungena ezihlangwini zeXperia X10 kwaye sele inevidiyo
ISony Ericsson Xperia Arc iya kuba ligama eliza kwamkelwa yindlalifa yeXperia X10 yangoku
I-Kies Air ikuvumela ukuba uvumelanise i-Samsung Galaxy yakho kunye nekhompyuter yakho ngaphandle
Ngesicelo seKies Air ungangqamanisa i-Samsung Galaxy S yakho nePC yakho ngeWi-Fi
UAsus Eee Pad Slider, ithebhulethi enebhodi yezitshixo
I-Asus Eee Pad Slider yitheyibhile yesayizi ye-intshi eyi-10,1 yesikrini esine-keyboard ekhatywayo ebonakalayo
I-Asus Eee Pad MeMo, incwadana yakho yedijithali ifika neHoneyComb kunye nescreen se-7-intshi
UAsus Eee Pad MeMo yithebhulethi yokuqala ye-Android evela kwinkampani uAsus enescreen se-7-intshi kwaye eza kuza neHoneycomb
I-Htc Evo Shift 4G, i-Android entsha enebhodi yezitshixo inikezelwe
I-Sprint ivelise i-terminal yayo entsha ye-Android 4G, i-Htc Evo Shift, ebandakanya ukutyibilika kwebhodibhodi ebonakalayo.
UZen Touch 2, umdlali omtsha woBuchule
I-Creative inesixhobo esitsha esele silungile, esibizwa ngokuba yi-Creative Zen Touch 2, esele idlulisa iimvavanyo ze-FCC ukuyivula ngokukhawuleza kwimarike. Kwaye, ewe bafundi abathandekayo, iya kuza ne-Android
Sivavanye i-Android tablet Archos 101 kwaye sicinga ngayo
Kudala sivavanya ithebhulethi yeArchos 101 ye-Android kwiintsuku ezimbalwa kwaye sikushiya uluvo malunga nayo
Iifowuni ezi-5 eziphambili ze-Android zika-2010
Uluhlu lwezinto ezinokuba ziifowuni ezi-5 ezilungileyo zika-2010 ngokwemithombo yeendaba ekhethekileyo
Bq Verne, icwecwe elinobizo lwabafundi
Isixhobo se-Bq Verne yithebhulethi ye-Android ekwabandakanya ingqokelela yeencwadi ezilungele ukonwaba kwithebhulethi
Isamsung W899, i-Android ekhethekileyo eTshayina
I-Samsung W899 sisiphelo sendala esinefayile ekhawulezileyo kodwa eneenkcukacha ezimbini zokuba nezikrini ezimbini kwigobolondo elingaphezulu.
Ngaba isonka sejinja sidinga ubuncinci beemfuno zehardware? I-LG ithi ewe
Ngokwe-LG ukuze ikwazi ukuhlaziya kwi-Gingerbread kuyimfuneko ukuba ubuncinci beemfuno zehardware
Uyifaka njani iMarike ye-Android kwizixhobo ezintsha zeArchos Android
Kumanyathelo amabini alula singafaka i-Android Market kwiipilisi ezintsha ze-Archos Android, ezinje ngeArchos 101
UFroyo uza nakwiipilisi zeArchos Android
IArchos ikhuphe uhlaziyo kwi-Android 2.2 kuluhlu lwayo lweetafile ze-Android ezibizwa ngokuba sisizukulwane 8
Sivavanye i-Htc Desire HD kwaye siza kukuxelela ukuba sicinga ntoni
Kwiintsuku ezimbalwa sivavanye i-Htc Desire HD kwaye sikuxelela ukuba sicinge ntoni ngale smartphone intsha ye-Android neFroyo
ISony Ericsson Xperia X8 ikwaqala ngohlaziyo lwayo kwi-Android 2.1
USony Ericsson uqalile ngokuhlaziya kwi-Android 2.1 yesiphelo sokugqibela ukufika kusapho lweXperia, iXperia X8
Amanqaku okuqwalaselwa ukuba uza kuthenga ithebhulethi ye-Android
Ukuba uza kuthenga ithebhulethi ye-Android kungekudala, unokuba nomdla wokwazi izindululo malunga nezi zixhobo.
Iifowuni ze-Smartphone ezilungiselelwe ii-terminals ze-Android
Ukuba uhlala usebenzisa i-terminal yakho ye-Android ukumamela umculo, unokuba nomdla kwezi ntloko zeefowuni sifuna ukukubonisa zona namhlanje. Olu luhlu lwe-BackBeat yee-headphone ze-stereo ezivela kwi-Plantronics.
Isifundo sokugcina impazamo xa ufaka i-rom yeFroyo enengcambu kwiHtc Legend
Ngaba uyafuna ukufaka i-rom kunye neemvume zengcambu kwi-Htc Legend emva kokuphucula i-Froyo? nasi isisombululo
Omnye wabenzi bakamabonwakude abakhulu behlabathi, i-Samsung, ujoyina iGoogle TV
Oyena mvelisi mkhulu kumabonwakude emhlabeni onje ngeSamsung uyakwazisa ukubambelela kwayo kwiGoogle TV ngoJanuwari
I-Samsung Galaxy Tab, sayivavanya kwaye sanika uluvo lwethu
Emva kokuvavanya i-Samsung Galaxy Tab yeentsuku ezimbalwa, sikushiya ukubonakala kwethu
Iintsimbi, ukubona usetyenziso kwiscreen esigcwele kwithebhulethi ye-Android
NgeeNxalenye ezingasebenziyo sinokuqhuba usetyenziso kwiipilisi ze-Android kwiscreen esigcweleyo
iHomePhone, ifowuni yedesktop ye-Android, kunye nesitishi semultimedia njengesiseko sokutshaja
Ithebhulethi entsha kunye nenkqubo yokusebenza kwe-Android. Ngeli xesha yiTechPad, isixhobo esenziwe eTshayina
IPoint of View ibhengeze iipilisi ezimbini ezintsha ze-Android kuluhlu lwayo lweMobii, enye ye-7-intshi enye ye-10,1-intshi, eya kuthi isungulwe kwintengiso ngoNovemba walo nyaka.
IHuawei X6 kunye neHuawei X5, ii-Androids ezintsha ezifika
Iiterminal ezimbini ezintsha ze-Android ziya kufikelela kwintengiso, i-Huawei X6 kunye ne-Huawei X5
Qwalasela ifowuni yakho ye-Android kunye neSynapse yenza ukuba yenzeke kuwe
Nge-Synapse ungayilungiselela ifowuni yakho ye-Android kunye neenkcukacha ozifunayo kwaye le nkampani iya kuyenza inyani
I-Acer Aspire Happy, i-netbook ene-Android 2.1 kunye neWindows 7
I-Acer ibhengeze ukufika kwe-Acer Aspire Happy, i-net-boot netbook ene-Android 2.1 kunye ne-Windows 7 yeenkqubo zokusebenza.
I-Htc Desire HD eneVodafone eSpain ukusuka kwi- € 0 kunye neHtc Desire Z kuphela kwiinkampani nakwabasebenza ngokukhululekileyo
IVodafone ivakalise eSpain amaxabiso e-Htc Desire HD kunye neHtc Desire Z
Ukuthatha amanqaku kwiGalaxy Tab akukho nto ingcono kuneBluetooth Stylus
Isixhobo kwithebhu yeGalaxy, iSylus enonxibelelwano lweBluetooth, ngoku iyafumaneka kwivenkile ekwi-intanethi
Ubukhali bubonisa iimodeli ezimbini zethebhulethi ye-Android kunye nenkonzo ye-ebook ekwi-Intanethi
I-Sharp ivelise iimodeli ezimbini zamacwecwe nge-Android kunye nenkonzo yokuthengisa ii-ebook kwilifu
Amanzi kunye namaqhuma akukho nto kwi-Motorola Defy, yijonge
I-Motorola Defy, ukuba isiphelo sendlela, iphumelele ngempumelelo kuvavanyo lokunyamezela, phantsi kwamanzi kunye nokothuka.
Sijongene neXesha loBuso?, Hayi enkosi, ngeGalaxy Tab senza iminxeba yevidiyo
Sibona eminye imizekelo yendlela i-Galaxy Tab ekwazi ngayo ukwenza iifowuni zevidiyo ngezicelo ezahlukeneyo
Sibona imvelaphi ye-Motorola Droid R2-D2
Zama imifanekiso yamaphephadonga e-Motorola Droid 2 R2-D2
Ithebhulethi yeGlobal Tab sele inexabiso ngezicwangciso zelizwi kunye nedatha e-UK
Umqhubi e-UK usungule izicwangciso zamaxabiso kwithebhulethi yeGalaxy Tab
Ithebhulethi yeGalaxy Tab iza ne-Super TFT LCD kwesikrini, kutheni?
Ithebhulethi yeGlobal Tab iza kuza nezikrini ze-Super TFT ze-LCD kwaye hayi ngeSuper Amoled, ngoba?
IArchos 101 ngokucokisekileyo, ukuba uyayifunda awusayi kuphinda ucinge ngenye ithebhulethi
IArchos 101 inokuba yenye yezona pilisi zigqibeleleyo ezine-Android ezikhoyo namhlanje kwaye zinikezelwe ngokusemthethweni.
I-Samsung Galaxy Tab ibhengezwe ngokusemthethweni, zonke iinkcukacha
Itheyibhuli yeSmasung Galaxy sele ivuliwe ngokusemthethweni. Nazi zonke iinkcukacha
Isidlali sePhilips GoGear Connect MP4 ngoku sisemthethweni
UPhilips wenze isidlali sayo se-Mp4 esine-Android esemthethweni kwaye sabizwa ngokuba yiPhilips GoGear Connect.
I-Samsung Galaxy Tab iza kulayishwa ngezixhobo, ukulungiselela isipaji!
I-Samsung Galaxy Tab iza kulayishwa ngezixhobo, izembozo, iichweba, iintambo zezinye zazo.
Siyazazi iinkcukacha zobugcisa beToshiba yeCwecwe
Ukusuka kwindawo enye apho sidibene khona nobuso beToshiba SmartPad ngoku sifumana iinkcukacha zangaphakathi ze ...
Isamsung i-Samsung S ineGlasi yeGorilla yokutyabeka kunye nesiqinisekiso seDivX HD
I-Samsung Galaxy S yongeza izinto ezimbini kuluhlu lwazo esele lide, uphawu lwayo lweglasi yeGorilla kunye nesatifikethi seDivX HD.
Ukuvumelanisa i-Htc kusivumela ukuba sikwazi ukungqamanisa i-Outlook kunye ne-Android terminal, ngoku iyahambelana nezinye iitheminali
Ukuvumelanisa i-Htc ngoku kusivumela ukuba sivumelanise i-Outlook kunye neemodeli ezininzi zeetheminali ze-Android
Vula i-Samsung Galaxy S yakho ngokulula ukuze ukwazi ukusebenzisa omnye umsebenzisi
Nge-XDA kuza isifundo malunga nendlela yokuvula i-Samsung Galaxy S ukuze ikwazi ukuyisebenzisa ngayo nayiphi na inkampani yefowuni.
Fumana ukufikelela kwengcambu kwiXperia X10 kunye neXperia X10 Mini ngonqakrazo olunye
Ngoku kunokwenzeka ukufikelela kwiingcambu kwiXperia X10 kunye neXperia X10 Mini ngonqakrazo olunye
I-Samsung Galaxy S ibhengeze eBrazil kunye nomamkeli weTV
I-Samsung Galaxy S iboniswe eBrazil ngenqaku elinye elitsha, isamkeli seTV sedijithali.
I-Samsung Galaxy Touch, enye indlela eya kwi-Android kwi-iPod Touch
I-Samsung Galaxy Touch okanye i-Samsung YP-MB2 iboniswa njengenye ye-iPod Touch kwaye ibandakanya i-Android 2.1
IMotorola ikhupha ikhowudi yemvelaphi yeDroid X
IMotorola ikhuphe ikhowudi yemvelaphi yesiphelo sayo seDroid X kwaye iyafumaneka kwiwebhusayithi yaseMelika yabaphuhlisi.
Amaxabiso eSony Ericsson Xperia X10 Mini Pro ngeVodafone
Amaxabiso eSony Ericsson Xperia X10 Mini Pro ngoku ayafumaneka ngeVodafone spain
Fumana ukufikelela kweengcambu kwi-Htc Desire ngonqakrazo olunye
Kukho isicelo esibizwa ngokuba asirhoxisiwe esikuvumela ukuba ufumane ukufikelela kwengcambu kwi-Htc Desire ngonqakrazo olunye.
I-Cruz Reader kunye neCruz yeThebhulethi ezimbini ze-Android 7 intshi ngokuthengisa
Izixhobo ezimbini ezintsha ze-Android zivela kwintengiso yokuqala, iCruz Reader kunye neCruz yeCwecwe.
I-Acer Aspire One D260, i-netbook entsha ene-boot ezimbini zeWindows-Android
I-Acer Aspire One D260 yincwadi entsha ye-boot netbook esinokuqalisa ngazo zombini Windows 7 kunye ne-Android.
Ingcambu yeSony Ericsson Xperia X10
Ukusukela ngoku ukuya phambili, unokuyincothula i-Sony Ericsson Xperia X10 yakho kwaye ngenxa yoko ufumane ukufaka iirom eziphekiweyo
Fumana i-Samsung Galaxy S ngesiqingatha sexabiso
Ngokuhambelana nokusungulwa kwe-Samsung Galaxy S eSpain, esi siginali siya kufumaneka ngesiqingatha sexabiso lesiqhelo.
Faka imvelaphi ephathekayo ye-Samsung Galaxy S kwi-Android yakho
Ngoku kunokwenzeka ukufaka imvelaphi yoopopayi ye-Samsung Galaxy S phantse kuyo nayiphi na i-Android terminal
IMotorola Droid X ngoku isemthethweni, zonke iimpawu zayo ziveziwe
IMotorola namhlanje ivelise i-terminal yayo ye-Motorola Droid X kwaye inemisebenzi emihle kakhulu.
I-Samsung Galaxy Q, i-Android enenkangeleko yeBlackberry
I-Samsung Galaxy Q iya kuba sisiphelo sendlela se-Android kodwa ngokubonakala kweBlackberry.
I-Samsung Galaxy S ene-Movistar ukusuka nge-Julayi ukusuka kwi-0 euros
I-Samsung Galaxy S iya kufumaneka neMovistar ukusukela ngoJulayi olandelayo.
I-Samsung Captive, i-Samsung Galaxy S itshintsha igama layo ibe yi-USA
I-Samsung Captive ligama elikhethwe yi-Samsung Galaxy S e-United States
I-Sony Ericsson Going, i-Android Walkman ibonwa kwakhona
ISony Ericsson ilungiselela ukumiliselwa kwesiphelo se-Android kuluhlu lwaso lweWalkman kwaye kubonakala ngathi sikufutshane kakhulu ukuyenza ukuba ibe sesidlangalaleni, iya kubizwa ngokuba yiGoing.
I-Samsung Galaxy i5500 kunye ne-Samsung Galaxy i5800, ezimbini ezintsha ze-Android
I-Samsung Galaxy i5500 kunye ne-Samsung Galaxy i5800 ziziphelo ezibini ezisandula ukwenziwa yiSamsung kwaye siza kuba nazo kwintengiso ngoJulayi.
I-Acer Aspire One D260, i-Android netbook eneebhutsi ezimbini
I-Acer Aspire One D260, yeyona netbook yamva nje ibhengezwe ngu-Acer oza kuza neDual Boot
I-Archos 5 yeThebhulethi ye-Intanethi sele inenkxaso evulekileyo ye-GL
IArchos ikhuphe uhlaziyo lweArchos 5 yeThebhulethi ye-Intanethi eyinika inkxaso kwi-Open GL
Ithebhulethi eneprojektha zonke kwinto enye kunye ne-Android
I-DigiLife isizisela umxholo omtsha wesixhobo kwaye kunjalo nge-Android njengoyena mdlali uphambili kwinkqubo yolawulo lwayo, yithebhulethi ekwayiprojektha
IHtc Legend ngokunzulu
Apha ujonga zombini izixhobo kunye nokugqitywa kwangaphandle kweHtc Legend, isiphelo sendlela ebesinayo kwiintsuku ezimbalwa.
I-LG Ally iphinda ivele ngeenkcukacha ezipheleleyo
I-LG Ally iphinde ivele isibonisa zonke iinkcukacha zobuchwephesha kwaye isazise umhla wokuqaliswa kwayo.
IMotorola MT810, eyokuqala i-Android enescreen esikabini
IMotorola MT820 iyavela kwakhona kodwa ngoku inegama elahlukileyo, iMT810 kwaye iya kuba yeyokuqala ngescreen esiphindwe kabini.
IHtc Inqwenela ngokunzulu
Siphawula ngeemvakalelo emva kokuzama i-Htc Desire kwiintsuku ezimbalwa.
I-Compaq Airlife 100 HP ye-Android netbook ngoku iyafumaneka ngeMovistar
I-netbook ye-HP ye-Android, iCompaq Airlife 100, neMovistar ngoku iyafumaneka
Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy Spica kwi-Android 2.1
Isifundo esincinci sendlela yokuhlaziya i-Samsung Galaxy Spica kwi-Android 2.1
Isilayidi seMyTouch 3G, iinkcukacha zobugcisa
Iimpawu zobuchwephesha beMyTouch 3G Slide ziyabonakala, ziqaqambisa inani le-RAM.
IHuawei C8600 ene-Android 2.1 iboniswa eTshayina
I-Huawei C8600 ibonakalisiwe namhlanje e-China ngokukhethekileyo okuza ne-Android 2.1
IHtc Incredible, incwadana kunye neempawu ezisemthethweni zobugcisa
Sele sinencwadana epheleleyo ye-Htc Incredible kwaye nayo yonke imigaqo esemthethweni yesiphelo.
ISony Ericsson Xperia X10, amava omnye omsebenzisi
Ndikuxelela ngamava am ngeSony Ericsson Xperia X10 ngeempelaveki ekusebenziseni kwesiqhelo kwesiphelo
I-Samsung Galaxy S kaJuni eRashiya nge $ 1.000
I-Samsung Galaxy S iya kufumaneka ngoJuni kwilizwe laseRussia ngexabiso elingenangqondo, ngaphezulu kwe- $ 1.000
I-Sony Ericsson Xperia X10 eneVodafone Spain, amaxabiso
Sele sinamaxabiso uSony Ericsson Xperia X10 aya kuba nawo ngeVodafone eSpain
I-Samsung Galaxy S ifihla amandla emizobo emangalisayo
I-Samsung Galaxy S ifihla amandla emifanekiso ashukumisayo ashiya i-Nexus One ngokwayo kwi-diapers
I-WePad, ithebhulethi ye-Android yokukhuphisana ne-iPad
I-Wepad yithebhulethi ye-Android esiza kuyibona ekupheleni konyaka kwaye i-iPad iza kuba lukhuphiswano lokwenyani